Jwxo-shiil iyo Beeshiisa oo ku Hawlan Sidii Loo Dhoofin Lahaa, Dambiileyaashii Jwxo-shiil la Shaqayn Jiray ee Beeshiisa. – Rasaasa News
Jwxo-shiil iyo Beeshiisa oo ku Hawlan Sidii Loo Dhoofin Lahaa, Dambiileyaashii Jwxo-shiil la Shaqayn Jiray ee Beeshiisa.
Feb 10, 2010 Eritrea, Jwxo-shiil, Ogadeeniya, ONLF
Fooxumooyinka Jwxo-shiil iyo beeshiisu ay galeen ee ay ku gaysteen magaca ONLF, meelkasta oo ay tagaan waa mid dabo socon, oo dayn ku ahaandoonta, Dalal guuleed iyo Dalal warfaana dakanahoodu dugoobimaayo.
Warar xan hoose ah, oo naga soo gaadhaya dalka Kenya, ayaa waxay sheegayaan in Jwxo-shiil uu si hoose ula hadlay beeshiisa beeshiisa, kulanka ayaa ahaa Teleconference laga hagayey Minneapolis. Jwxo-shiil waxaa uu u soo jeediyey beeshiisa in dalka laga dhoofiyo qaar ka mid ah dhalinyaradii hore ula shaqayn jirtay isaga, gaar ahaana xubnihii wax ka fuliyey dilkii Dr. Maxamed Siraad Dolal iyo qaar dhibaatooyin beeleed ka gaystay gabalka dhagaxbuur.
Jwxo-shiil, oo dhibaatooyin badan cagaha u galiyey beeshiisa isaga oo waxyeelo badan ugu gaystay magaca ururka ONLF, beelo iyo qoysas gaara ah. Dhibaatooyinkii uu gaystay ayaa waxaa aad looga dareemaa meel walba oo ay joogaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyaga oo farta ku fiiqa beesha Jwxo-shiil.
Jwxo-shiil, oo Eritrea xabsi dawlo ku ah, ayaa wali in yar oo qoyskiisa ah ku qadhaabta. Jwxo-shiil, ayaa waxaa culays saaray wiilal uu adeer u yahay oo ah kuwii baa,biyey ururka ONLF, eeggana ku sugan Kenya iyo Somaliya. Naar galayaashan oo gacantooda ku dilay N/hurayaal badan ayaa aad uga cabsanaya in lagu waxyeeleeyo meelaha ay joogaan.
Hadaba, kulanka telefoon [teleconference], ayaa waxaa daa,dihinayey Cabdala Af Waranle oo Dubai jooga, Xuseen Mataan oo Maraykan jooga iyo Fu,aad Cali Cumar oo jooga Ingriiska. Waxayna go,aan ku gaadheen sidii loo dhoofin lahaa dambiilayaasha, kala gaabiyey N/hurayaashii ONLF ee halganka waday.
Waxay beeshu isla qaadatay, in kolka hore dambiileyaasha la geeyo dalka south Afrika, ka gadaalna loo sii gubiyo dalalka reer galbeedka, gaar ahaana Yurub, sababta oo ah Maraykanka waa lagu dacweyn karaa, laakiin Yurub waxba kama khuseeyo dambi ka dhacay wadan kale, hadii uusan ahayn dambi caalami ah.
Waxay beeshu ku go,aansatay sidii lagu heli lahaa kharajka lagu dhoofinayo dambiileyaasha dilay N/hurayaasha iyo beelaha, waxayna isku raacday arimahan hoose;
1. In la hawlgaliyo Habrihii hore qaaraanka ugu uruurin jiray kooxda Jwxo-shiil, oo ay bilaabaan qaaraan deg deg ah iyaga oo lagu hawlgalinayo in ay dagaalo ka socdaan dhulka Somalida Ogadeeniya, ayna u badan tahay in kooxda Jwxo-shiil, ay sanad gudihii Itobiya dalka kaga xorayso, loona baahan yahay dhaqaale deg deg ah iyo dhiig joojin.
2. In qoys kasta oo beesha ah uu bixiyo US$200, Qoyskii ganacsi fiican lehna ay bixiyaan US$500.
3. In qaaraanka beesha iyo qaaraanka beer laxawsiga la kala qaado, lana kala qariyo ilaa iyo inta laga dhamaystirayo.
4. Inta qaaraanka beerlaxawsiga ah la gurayo waa in shirar la qabtaa ay hawlwadeeno ka yihiin xubno beesha ah oo kolka ugu dambaysa uu qaaraanku gacantooda galo.
Ugu dambayn kolka Afrika laga dhoofiyo dadkan dhagarta galay, waan faraha laga qaado kooxda Jwxo-shiil, islamarkaasna wadahadal laga furaa beelaha godobta laga galay.
Qoraalkan waxaa na soo gaadhsiiyey dhalinyaro Abti loo yahay oo la mooday in ay reerka yihiin
Dolalkii Dusha Geeyey ma Jwxo-shiilkii Dilaybaa, Nuur Naruuro u Gaysan oo Nacfi uu ka Sugaa!